Uthelwe phansi ngequpha umsakazi wodumo - Umbiko | News24
Uthelwe phansi ngequpha umsakazi wodumo - Umbiko
Durban - Isimo kuthiwa siphenduke samuncu endaweni yobumandi ngesikhathi kulahlwa phansi usaziwayo odumile eNingizimu Afrika futhi ongusomabhizinisi.
Imithombo yeLANGA LangeSonto engalali endleleni ipotshozele leli phephandaba ukuthi uThabo Molefe odume ngelika Tbo Touch ushaywe kabuhlungu eseKong, eSandton eGoli, ngoMgqibelo odlule lapho ubenze khona umcimbi.
Le ndawo iyaziwa ngokuba ngeyeqophelo eliphezulu njengoba ihanjelwa ngomtakabani abadla izambane likapondo kanye nosaziwayo abasezingeni eliphezulu.
Ngisho umshayi sibhakela osethathe umhlalaphansi odume umhlaba wonke uFloyd Mayweather wase-United States of America (USA) uke wavakashela kule ndawo.
Ngokuthola kwaleli phephandaba, kuthiwa uTouch ushaywe ngemuva kokungaboni ngasolinye nabathile abehamba nabo.
Ulanda umthombo uthi umsindo uqale ngesikhathi sekumele kukhokhelwe iziphuzo ezibiza imali eshisiwe, ebezicima ngazo ukoma izimenywa.
Kuthiwa bekulindelwe isiqumama esithile ebesizokhokhela i-bill yalezo ziphuzo kodwa konakala sesingasafiki leso siqumama esingatholakalanga igama laso, kwase kuqala ukuqophisana ngamagama.
OLUNYE UDABA: ISidingo siphume phambili ezinsolweni zokucwasa
Omunye umthombo osondelene kakhulu noTbo Touch, obukhona kwenzeka lesi sigameko, yize noma ungandanga ngamazwi kodwa usiqinisekisile lesi sigameko.
"Kube wumzuzu odumazayo lowaya. Ngeke ngikwazi ukukhuluma ngale nto ngoba uTouch sizwana kakhulu naye," kusho umthombo.
Lo mthombo uveze ukuthi bebebaningi abantu abebekule ndawo ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko.
Okhulumela uTbo Touch uLulu Mthimkhulu, uvumile ukuthi uTouch ubeseKong ngalolu suku ehambisana nethimba labasakazi besiteshi sakhe iTouch HD beyokwethula ngokusemthethweni iJuly Touch Convoy, okuyinhlabaluhide yezimoto ezizobe zisuka eGoli ziphelele eThekwini njengoba kuzoba nomjaho wamahhashi omkhulukazi iVodacom Durban July (VDJ).
Uphike walala ngomhlane ukuthi kube khona ukuhilizisana.
"Asikho isigameko esifana naleso, ngoba sasinomcimbi laphaya futhi sihamba nabasakazi bonke," kusho uLulu Mthimkhulu.
UTouch uzakhele igama ngesikhathi esengumsakazi eMetro FM asebenze kuyo iminyaka eminingi, kwaze kwaba ukhonjwa indlela ngonyaka odlule.
Usuke lapho wajoyina uGareth Cliff, basebenzisa kwisiteshi somsakazi esitholakala kwi-internet sikaGareth, esibizwa ngokuthi yiCliff Central. Akahlanga isikhathi eside njengoba exebuke lapho, wabe eseziqalela esakhe isiteshi naso esitholakala kwi-internet iTouch HD.
Uphinde wazakhela igama ngokusungula umkhankaso obizwa ngokuthi yiTouch 4 Pipes Convoy, okuyinhlabaluhide yezimoto ezibiza imali eshisiwe, ezishaya ngamapayipi angaphezu kwamabili, ezihamba zishaye ujenge uma kunemicimbi emikhulu egcwele osaziwayo.